HMF : MANAITRA NY SAIN’NY VAHOAKA MALAGASY – MyDago.com aime Madagascar
HMF : MANAITRA NY SAIN’NY VAHOAKA MALAGASY
Hanatanteraka hetsika etsy Antsahamanitra ny Alakamisy 01 Novambra izao ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF). Araka ny nambaran’ireo mpitarika nahitana ny mpitandrina isany Randriamorasata Roger, Ramamonjisoa Philibert, Maurice de dieu, tetsy amin’ny Bon accueil ny maraina teo dia hanomboka amin’ny 2ora tolankandro ny hetsika. Fotoana izay hitondrana am-bavaka ny firenena indrindra ho an’ireo mila vonjy toy ny any Atsimo. Fotoana ihany koa ahafahana makahery ny mpiarabelona. Hisy ny dinidinika ho atao amin’io fotoana io. Sambany vao ahazo indray ny kianjan’Antsahamanitra ny HMF tao anatin’izay roa taona izay hoy Randriamorasata Roger, satria nisy nydidim-panjakana mandrara ny fanaovana hetsika ho azy ireo tao. Rah any tokony ho izy hoy izy dia tokony tsy hangataka alalàna ny fiangonana hanaovana fotoam-pivavahana ao kanefa tsy navela izany. Efa nahazoana alalàna tamin’ny tomponandraikitra io hetsika amin’ny Alakamisy io hoy izy ireo, ka hanentanana ny kristianina tsy ankanavaka. Nambaran’ny HMF fa miady mafy amin’ny fiarahan’ny olona mivavavak izy ireo ary mbola heady amin’ny fangatahana hanafoanana io didim-panjakana io. Tokony avela hahalalaka ny fanehoan-kevitra eto amin’ny firenena. Ankoatra izay dia hiverina amin’ny hetsika rehetra toy ny efa nataon’ny teo aloha ny HMF mba hisain’ny fanafahana ny firenena. Mahakasika ny raharaham-pirenena dia nambaran’nyHMF fa vahaolana hosoka no natao teto amin’ny firenena satria zavatra tsy tanterahina nefa nekena. Ny fomba nanoratana ny tondrozotra hoy izy ireo dia tsy fantatra mazava hoe iza marina no nanoratra azy. Toy izany koa ny fanganana ny société civile dia sandoka. Momba ny FFM dia antoko politika mpomba nyfitondrana no ao ary te haka ny toerany ho azy ireo ao anatin’ny cst sy ct. Régle de majorité no misy eto fa tsy fiarahamitantana. Nytombontsoanay mijoro hoy ny HMF dia ny fanenjehana anay rahampitso. Noho izany dia manaitra ny sain’ny vahoaka izy ireo hotongasaina. Momba ny fifidianana dia nambaran’ny HMF fa tsy vahaolana izany satria hosoka ihany koa.Fomba ahoana hoy izy ireo no hanatontosana fifidianana amin’izao toe-daraharaha-mpirenena izao satria n any fanisam-bahoaka any atsimo aza tsy mbola mandeha. Nametraka ahiahy amin’ny Cenit ny HMF ny amin’ny hoe mahaleontena marina ve io rafitra ? Vahaolana naroson’izy ireo dia ny hoe ndao hifamela ny samy malagasy, na hifanaraka hanomboka zavatra miaraka. Rehefa tsy mety mifamela dia miala teo ny mpitondra fat, ka tsy olana raha mankany amin’ny tetezamita vaovao. Momba nyany atsimo dia nambarany fa zavadoza no mitranga any. Ny miaramaila sy izy manambasy no manampatra fahefana amin’ny vahoaka. Noho izany dia mbola manjaka ny tsy fahamarinana eto amin’ny firenena. Namafisin’izy ireo fa vonona hijoro hatrany ny HMF raha mbola misy ny tsy rariny.
VAHOAKA MIRAY : hihazo ny kianjan’ny 13 may raha tsy…
15 réflexions sur « HMF : MANAITRA NY SAIN’NY VAHOAKA MALAGASY »
resaka fivavahana dit :
tsara ny hevitry ny HMF fa saingy tokony tsy afangaro mihitsy ny fivavahana sy ny politika. Afaka miresaka politika mihitsy izy ireo, izany hoe tokony efa ela no tsy ekena mihitsy ny fitondran’i Bandy kely, ary tsy asiana resaka hoe hivavaka izany fa na i Jesoa aza efa nanavaka mihitsy ny zavatry ny tany sy ny fanjakan’ny lanitra. Vakio ny baiboly fa marina io lazaiko io. Aleo tsy hampirevena intsony ny olona hihonona @ fivavahana fa tena hamporisihina hanao hetsika azo tsampaintsika olombelona tanana fa tsy efa ampy izay ny fangatahampivavahana ary Andriamanitra tsy marenina akory fa aoka lahy tsy hatao fihafenana intsony ny fivavahana. Fa isika olombelona no nisafidy izao mahazo antsika izao ary na dia i Rajoelina aza ange efa nilaza fa Andriamanitra no nametraka azy teo. Iza ihany no inoana ? La réligion est-elle l’opium du peuple ???
resaka fivavahana tohiny dit :
Aza akipikipy toa @ io sary io re ny masonareo ao @ HMF fa mahamenatra an’izao tontolo izao eh. Hahirato dia jereo ny zavamisy ary samia mivonona hanongana an-dRajoelina fa mijaly ny vahoaka.
Miala tsiny amin’ny rehetra aho, indrindra amin’ny Atoa ary Filoha hajaina Ravalomanana, fa tsy vitan’ny vavaka intsony ity raharaha ity !
Efa ho efa-taona izao no ao anatin’ny krizy ny vahoaka malagasy, ary tsy tanisaina intsony ny faty olona isan’andro vaky izao !
Na misy na tsia fanomezan-dalana, dia etsy amin’ny KIANJAN’NY DEMOCRATIE atao ny FOTOAM-MPIVAVAHANA, ary ny metimety koa ENY AMIN’NY 13 MAI ! Izany mba ho hitan’izao tontolo izao fa efa malaka ny fahazahoana MANEHO HEVITRA, INDRINDRA AMIN’NY HALÀLAN’NY FIVAVAHANA !
Tsy misy fifidianana ho vita, RAHA MBOLA AZO AMPITAHINA AMIN’IZANY SAODÔMA SY GÔMÔRO izany ny fiainana ao Madagasikara !
Mandroata ianareo taratasy any amin’ireo VONDRONA SAMIHAFA, indrindra ny eaopeana satria ao anatiny ny Frantsay ! HISY VOKANY KOKOA IZANY, TOY IZAY HITARIKA SY HAMPIESONA NY OLONA AMIN’NY VAVAKA !
Ohatra fotsiny, satria ianareo lany andro amin’ny vavaka, ny sasany manohy ny asa-ratsiny. Zavatra toa itony no hitan’ny olona dia NY VAHOAKA INDRAY NO TSY MANANA NY RARINY, FA NY JIOLAHY NO TOA ARAHAN-TENY !!
IREO MPANGALATRA SY MPANOTA indray no avo-vava !
Fa hono hoy aho ?mba misy resaka mba azo hinoana ve izay lazain’ity Boloky lahy???
Raha nahazo tehaka be P. Obama t@ kabariny tany @ tany Arabo fa nilaza hoe:
« Salama lekôma » dia mba avy koa domelina mba nanao izany tany @ faritany ,fa dia na ny dikany aza tsy fantany akory,
ary dia nianaana daholo ny vahoaka teo, koa ity mba lazainy fa « Andriamanitra no nametraka azy teo??? » raha olona
mahalala izany Andriamanitra izany izy tsy AHAVANONA IZAO ataony izao fa fitaovana toy ny mahazatra ihany io e!izay
mahasoasoa sy mahafinaritra azy ihany,toy ny « tsy hilaina ny fitsabahan’ny any ivelany « rehefa manohintohina ilay
TOMBOTSOANY ihany anefa an! avy eo hay VIDINA sy LELAFINA ny GENA ary ampianarina MISANDOKA toa azy
ireo mihintsy aza dia ny sisa tsy voatanisa ………….
resaka fivavahana/KintanamananDrambo/sy ny hafa manana hevitra mitovy aminareo>>>>> mamaly anareo aho, fa mila fanazavana mihitsy ny teninareo: fanontaniana no hapetrako voalohany; IANAREO IREO VE RAHA MITENY HOE AMPY IZAY NY FIVAVAHANA? NA HOE TSY VAVAKA INTSONY NY VAHAOLANA, ianareo ireo ve nefa aloha mba efa tena nisy fotoana nandohalika, nifona, nitaraina, tamin’ Andriamanitra ny hivahan’izao Krizy izao? mody hapetrako ny fanontaniana, fa na tsy mpahalala ny miafina aza aho dia fantatro fa matoa ianareo sahy miteny ireo teny ireo momba ny fivavahana, dia TSY NANAO IZANY IANAREO. Mety nisy tokoa ohatra fotoam-bavaka natrehanareo ho an’ny firenena, saingy izaho mino fa MPANOTRONA FOTSINY NO NAHATONGAVANAREO TANY SATRIA METY HO MITOVY HEVITRA AMINAREO @ RESAKA PÔLITIKA NY MPANASA. Mangataka anareo aho tsy hamaly ahy fa hitsakotsako fotsiny izay voalazako izay na marina izay na diso. Ireto HMF ireto mantsy amin’ny mpitondra fivavahana azy, hinoako fa tsy maintsy nisy ny fitokanany manokana tsy hitantsika tamin’ Andriamanitra, mety fifadian-kanina koa io, na fiaretan-tory hivavaka, ary ny toy ny hataony ao Antsahamanitra dia tiany ihany koa hanaovany izany miaraka @ hafa indray, mba hanatanterahany ny tenin’ Andriamanitra hoe » Mahareta amin’ny Fivavahana » » Raha @ fonao tokoa no hivvavahanao; dia tsarovy fa ny VAVAKA MANOVA ZAVATRA » ka ialao ny » vavaka miabahamba, sy sadasada fa izay no tsy ahitantsika vokatra. Ary ny momba ny hoe tsy tokony hafangaro ny FIVAVAHANA sy ny PÔLITIKA diadisoako ihany koa, satria ny Olona no tokony hitondra ny pôlitika fa tsy ny pôlitika no mitondra ny olona; ka ilaina ny olona marina mpivavaka marina amin’Andriamanitra no Manao pôlitika satria afaka hanatanterahany ny sitrapon’ Andriamanitra ny fanaovany pôlitika; fa raha mpangalatra ohatra no manao pôlitika dia entiny hangalarana no hanaovany pôlitika, fa tsy hoe ny pôlitika no halatra sy lainga. ny pôlitika @ maha pôlitika azy dia « Neutre » fa ny olona manao azy no maharatsy ny pôlitika na mahatsara ny pôlitika.
30 octobre 2012 à 21 h 39 min
Mazotoa mivavaka ry zareo an, ary na tsy hazoto aza ianao, aza kihanina ny Mpitondra fivavahana izay mpaminanin’Andriamanitra amin’izao androntsika izao fa izay no asan’ny Mpaminany, mitondra am-bavaka ny fiainan’ny firenena, mampivavaka ny olom-pirenena eny fa na dia ny mpanjaka aza (izany hoe ny mpitondra) dia adidiny ny mampivavaka azy; samy manana ny asany sy ny hiantsoan’ Andriamanitra azy io ka tsy tokony hifanakiana fa ny mifampahery aza no tokony hatao.
Tsara ho fantaratao, fa tsy mitovy toy ny tamin’ny 2001/2002 intsony ny contexte !
Tamin’izany andro izany, nisy zokiko vavy 4 izay efa 72 taona ny zandriny indrindra no nitolona sy « nivavaka » teny amin’ny 13 Mai !
Devoly tsy mbola nisy toy izany amin’izao fotoana no fahavalo !
RESAKA DROITS DE L’HOMME SY DROITS, AMIN’NY LAFINY REHETRA NO TOKONY HITONDRÀNA NY TOLONA FA TSY IZAY VAVAKA ! TSY RARAHIN’NY « AMANIN’IREO MPANONGAMPANJAKÀNA IREO » IZAY FIVAVAHANA IZANY HOY AHO, EFA ELA IZAY !
Tena miala tsiny amin’ny rehetra ny tenako, fa dia tena voapepo amin’io resaka io ny olona rehetra !
Mivavàha, miezàha, ataovy izay tratrin’ny herinao mba hanaovanao ny marina mandritry ny fiainanao, mba hihidiranao any amin’izany paradisa izany !!
Ny paradisa na ny afo be fantatro aloha, dia ny fiainako eto an-tany, na dia manao zavatra be dia be izay tsy azonao an’eritreritra akory aza, eo anivon’ny mpiarabelon’amiko ! Tsy ho tantaraiko eto daholo izay zavatra vitako sy ataoko rehetra !
Ry OMAR sy PEDRO ireny no mpitondra fivavahana « fantatro tsara », ary tena nisy notohanako MAFY TSARA TALOHA !
INONA NO VOKANY ??
Marina tsisy ady hevitra ny an’i Resaka fivavahana. Tsy mitarika hivavaka ny mpitondra fivavahana fa mitarika hanao politika. Saika hita ao anatin’ny politika avokoa, ny lainga, ny fankahalana ny adversaires, ny kolikoly sy ny fanambazana volabe. Ny mission n’ireto pasitera FJKM ireto, de ny manentana ny vahoaka hihetsika hanongam-panjakana zay tsy hahavita izany na oviana na oviana, fa avelao ho very any zay ho very raha ny ara-panahy eto no tianay lazaina. Avelao hiparitaka any ny ondry, fa zahay nandray ny volabean’ny patron ka tsy maintsy manao ny mission-ny. Ny mission n’Andriamanitra aminay de ambinambin-javatra, ary zara misy Azy, hahafahanay mialokaloka woe, zahay manao zavatra amim-pahamarinana sy ara-baiboly @ maha » MPAMINAN’ANDRIAMANITRA ANAY, ARAKA NY TENIN’NY IRAY ETSY AMBONY ». De lany andro ny pasitera mipetraka any @ sezan’ny antenimiera sy ny institution sasany any, milatsaka député, mizara vola hanaovana kolikoly handaniana an’i patron ho vice PD.
De tsy be ve zay natao zay ny HMF fa nidona ny tafo ny vavaka de niverina a!
Raha te hanao politika, de esory ny raoby lava, de tarito ny olona hidina an-dalambe, fa aza mody Andriamanitra no atao fitaovana lava izao hanafenana ny politika ratsy.
Tsara mihitsy ny fanapahankevitry ny mpitondra ankehitriny, tsy manohana ireo mpiatandrina mpanao politika ireo, izay malahelo fihinanana t@ andron’i patron, tena natavy be satria azony nampiasaina hanamafy ny sezany ka hankalaza ny anarany hatreny ambony pilipitra; fa manohana kosa ny hetsika hampandroso ny fiangonanana indrindra ny tanora. Ary za mino, fa ny mpivavaka tsotra tsara sitrapo, defa tena leo sy mandoa an’ireo, ka tsy manaraka intsony ny politikany, ary indrindra ny vahoaka, fa matoa misy olona eo, de ny zanakidada avy eny @ magro no mandeha eny, ka itony ry Andry tsy Domelina itony, no pion n’ireny mody mialoka @ fivavahana ireny, hanatanterahany ny politika ratsiny feno fitaka sy lainga ary fanenjehana olona, de aza manantena woa, fa mbola mahery lavitra sy tsy refesi-mandidy noho nareo lay Andriamanitra Masina, ka tsy azonareo ampiasaina @ zay tianareo hatao hamerenana ny dadanareo, zay efa nofaiziny elabe, noho io toetra ratsy mampiasa ny Ray Masina atao fitaovana io, de vao maika ho fahavoazana hatrany no hiandry anareo @ ho avy, satria tsy miady @n-dRajoelina ianareo fa miady @ Andriamanitra, izay nianianan’ireto lava Raoby ireto, ny mba hikarakarana ny ondriny kanefa navelany nihahaka, @ fanaovany politika de potika hatramin’ny fiangonana.
Araka ny fanadihadianana nataon’ireo mpahay statistika momba ny firobobioan’ny sectes, de saika ny mpino FJKM no be lasa voatarik’izy ireny, noho ny fahadisoam-panantenana ataon’ny mpitandrina azy. Mba mieritreritra ry lava Raoby, fa nareo natao hitsikitsika hivavahana indray itony no manondrana mitarika ny ondry tandremanareo ho any @ fahaverezana, tahaka ny lamasinina, raha mivarina an-kady ny lohany, de manaraka azy any daholo zay taritiny.
Aoka re e!!MAHONENA oah!!ny kary no manao ny hataony dia ny
saka no voatapa-drambo.
MBA sendra nijery TV5 aho alina dia inona ity resaka amnistie 2002?????sao dia efa MIVIKA ny ALIKAn’i Deba sa????
izao zavamiseho izao dia efa ketrika sy tanjon’i Deba fa fotsiny ny azy NATAONY MIADANA satria nanantena mafy lery
ny hitondra teo mandrakizay, fa ny an’i domelina sady tsy FAHAIZANA no fantany tsara fa tsy SAHAZA ny lohakeliny io
toerana nangalariny io dia eo koa ny tsy fahalalana ( mba nianarany taiza moa?) ka voatery hafainganiny toy izao ilay
FAHARATSIANA, FANJAKAZAKANA sy HABIBIANA MAMBA RERAKA e!!! mba hitany taiza??ny reniny aza mizara TAXI
raha mba hiakatra @ ville, dia izao natsangana ny tamboho be fa tsy hilaina intsony ilay namana mba niara-nizara ilay
frais-na TAXI taloha, toa ny nahazo andry Charles e!!dakana daholo izay natao tohatra rehetra hiakarana,MAHONENA!!!!
POV CON!!!MAHONENA ny ZANAKA ADALA!!!!
Dia miakapokapoka re izao tompoko!!!MISY TSY METIMETY @ lohan-drangahy
fantatro fa lehilahy ianao manoratra io ary haiko ianao e!!rehefa sy atsy ve tsy aroa???
ry Marty ( angah???) .Hainao koa ve io ry Kintana??io anie ilay mialazalaza lava eto hoe
marina ihany ny tenin’i Bogor sns e!!ary mety ho izy mihintsy aza ilay ravôpl sy bogor sns
Mahitsy ary marina be loatra ny teninao Kintana.
31 octobre 2012 à 10 h 22 min
Io indray ilay fanasaraham-bazana,manomboka mietsiketsika daholo indray ny
atsy sy ny aroa fa hoe ho avy indray i dada!!ny mpianatra, ny mpitondra fiavavahana
ny mpiasam-panjakana dia iza koa no manaraka???nefa anie tsy misy mahasahy manambatra ilay hery akory e!!
mitsitokotoko ohatry ny tainalika mba hampisehoan’i foza ny heriny VE???dia hoe hiovotrovotra ny zanak’i dada??
Na dia miafinana aza, tonga dia kobo ranavalona â !
« Raha ny tokony ho izy dia tokony tsy hangataka alalàna ny fiangonana hanaovana fotoam-pivavahana ao, kanefa tsy navela izany. EFA NAHAZO ALALÀNA TAMIN’NY TOMPON’ANDRAIKITRA io hetsika amin’ny alakamisy io »
Mino sy manantena aho fa fantatr’ireo olona ao anatin’io HPM io ny atao hoe DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
Efa ho efa-taona izao ny fanonganam-panjakàna, sy ny vokatra ratsy rehetra naterak’izany ! Mba nanoratra sy nihaona tamin-dry Ban Ki Moon sy ireo tompon’andraikitra rehetra misahana an’izany atao hoe LIBERTES FONDAMENTALES ve ry zareo, hitantara sy HANEHO NY TSY FANKASITRAHAN’NY VAHOAKA MALAGASY AN’IZAY ZAVA-MISEHO AMIN’IZAO FOTOANA IZAO ?
Tsara ho fantatry ny rehetra, fa ny fanehoan-kevitra dia zoan’ny tsirairay, ary tsy voatery antsoina hoe resaka pôlitika, ny FANDÀVANA NY ZAVATRA TSY RARINY SY NY FITAKIANA NY ARA-DALÀNA !!
Raiso ry zareo ny tena andraikitra â !
Ho avy indray, hijery ny zava-misy marina ao amin-tsika ny solotenan’ny Amnesty International, mandritry ny erin’andro izany hoe du 3 au 11 novembre.
Lazao amin’Ingahy Christian MUKOSA ireo zavatra voatanisanareo ireo, miaraka amin’ny porofo rehetra ; tsara ENTINAREO REHETRA any Atsimo any mihintsy izy, HAHITA MASO !!!
Ho an’ny mpiaro sy mpandàla ny ara-dalàna rehetra, ianareo koa afaka manoratra any amin’ity olona ity, mandefa an’izay AZO ALEFA REHETRA (Documents, photos, liens video,…) !
sophie.rosenberg « ao amin’ny » amnesty.org
Mba vakio tsara ny art. 10,11,13, ary indrindra ny 19
Ny tena andry tsy domelina,mitovy hevitra @ nao aho fa tena mila mivavaka,sady mitovy hevitra @ KM am le hoe « devoly tsy mbola nisy toa azy am zao fotoana no fahavalo »,ary mino marina aho fa noho ny fisian ny olona mbola mijoro eo am banga mivavaka no mbola tsy maha lany ringana ny malagasy am zao.Fa izaho tsy manda ho an zay tsy mino an zany herin ny vavaky ny marina izany, denoncer-o am hery rehetra izao zavatra tsy mety hiainantsika izao toy izay miaritra manao be manaiky fotsiny.Fa raha ny tena marina aloha raha fantatsika fa devoly tsy mbola nisy toa azy no fahavalo,dia tsy misy afatsy ny finoana ny ran ‘ Jesoa kristy nalatsany teo am Hazo fijaliana no maharesy ny devoly;raha izay mety ho fahaizan olombelona tsy haharesy devoly na oviana n’oviana.Ary izay no mahatonga an ilay kely io mbola manao izay tiany hatramin izao :misy hery hafa ao aminy satria nanao pacte tam devoly izy.Izay hiafaran ‘ilay kely io aloha anazy sy ny devoly iny ,na dia nataony nanan karena be vetivety aza; fa isika mianakavy ve hijanona eo ambany fampijalian’io?
Tsy fanenjehana ny olona mivavaka ny resako ry soapeta, fa hoy aho hoe :
FOMBA FIADY TSY MANDAITRA INTSONY !!!
Moa ve tsy toy ny tantaran’ireo menalamba taloha, nilàza hoe : Rano rano !
Nanantena fa handaitra izany hoe ody ary ho lasa rano ny bala, dia dangy teo daholo voatifitry ny mpanjanaka !
Précédent Article précédent : Rakotomanjato Rodin : Nanolotra « kit’s scolaire » ho an’ny CEG Mangatany
Suivant Article suivant : AOKA ISIKA HANORATRA ANARANA AMIN ‘NY LISIM-PIFIDIANANA